Amin'ny maha olona iray nanao asa aman-draharaha noho ny atiny, ny serasera ary ny fitantarana dia manana toerana manokana ato am-poko aho ho an'ny anjara asan'ny "tontolon-kevitra." Izay ifandraisantsika — na amin'ny raharaham-barotra na amin'ny fiainantsika manokana - dia tsy misy ifandraisany amin'ny mpihaino fotsiny rehefa takatr'izy ireo ny momba ilay hafatra. Raha tsy misy ny sahan-kevitra dia very ny dikany. Raha tsy misy ny sahan-kevitra dia very hevitra ny mpijery momba ny antony ifandraisanao amin'izy ireo, ny zavatra heverin'izy ireo halaina, ary, amin'ny farany, ny antony mahatonga ny hafatrao
Bilaogera orinasa ho an'ny Dummies: resadresaka niarahana tamin'i Chantelle Flannery
Alarobia, Jolay 7, 2010 Zoma, Oktobra 23, 2015 Douglas Karr
Ity ny horonantsary faharoa, miaraka amin'i Chantelle Flannery, ao amin'ny horonan-tsarimihetsika nosoratanay ho famoahana ny Corporate Blogging for Dummies. Tamin'ny fiandohan'ity andro ity dia namoaka ny horonantsary voalohany izahay, miaraka amin'i Douglas Karr. Ny tanjonay amin'ireo horonantsary sy ny fampidirana azy ireo ao amin'ny tranokala Tips Blogging Corporate dia ny: hampiroborobo ny famoahana ny boky, Corporate Blogging For Dummies. Mampiroborobo ny tranonkala sy ny bilaogin'ny orinasa ao amin'ny Twitter sy Facebook. Mampiroborobo ny orinasa miteny sy mampianatra izaho sy Chantelle
Fitorahana bilaogy ho an'ny Dummies: resadresaka ifanaovana amin'i Douglas Karr
Rocky Walls sy Zach Downs avy amin'ny belas Stars Media dia nidina tany amin'ny DK New Media birao sy horonan-tsary nitifitra anay sy Chantelle tamina horonan-tsary roa tianay hapetraka ao amin'ny tranokala Tips Blogging Corporate. Fotoana nahafinaritra ity. Tsy nisy na ny script na ny famerenana ny atiny rehetra. Nodinihinay ny tanjonay talohan'ny fitifirana: hampiroborobo ny famoahana ny boky, Corporate Blogging For Dummies. Mampiroborobo ny tranonkala sy ny bilaogy ataon'ny orinasa
Ny vakiteny manaraka: Marketing marketing
Talata, Martsa 25, 2008 Alatsinainy Martsa 7, 2016 Douglas Karr
Manaraka ny lisitry ny famakiana (izay tena manangona) ny Gravitational Marketing. Ireo olona mahafinaritra ao Wiley dia nandefa ahy ny Book Marketing - tsy maintsy fantatr'izy ireo fa mpinono amin'ny boky Marketing aho. Ho anao izay misoroka ny boky fandraharahana toy ny pesta fa te handalina ny fitondran-tenan'olombelona… izany no tiako amin'ny boky Marketing. Nisy nanontany ahy indray mandeha raha efa nianatra sosiolojia aho. Heveriko fa manana a